नेपाल आज | राष्ट्रपति विद्याको विकल्प केपी ओलीले नै किन नखोज्ने ?
राष्ट्रपति विद्याको विकल्प केपी ओलीले नै किन नखोज्ने ?
विद्या भण्डारीकै कारण वाम एकता नभाँडियोस्
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख फेरिनुपर्ने छ । तर वहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सोही पदमा दोहोरिन पहल गर्दैआएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले त केही गत शनिबार आफू निकट एमाले र माओवादीका नेताहरुलाई लन्च मिटिङ नै आयोजना गरी यसबारे आफ्नो ईच्छा राखिन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत रहेको नेताहरुको भेटमा भण्डारीले आफू दोहोरिनुपर्ने बताएकी हुन् ।
राष्ट्रपति निवास स्रोतका अनुसार भण्डारीले नयाँ राष्ट्रपति राख्दा राज्यलाई समेत व्ययभार पर्नसक्ने भन्दै र वाम एकतापछिको नयाँ र विशिष्ट अवस्थामा आफ्नो भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
भण्डारी फेरि किन ?
विद्यादेवी भण्डारीको यस्तो ईच्छालाई केही कोणबाट हेरिएको छ । एमाले बृत्तमा केहीले भण्डारीको निरन्तरतालाई सकारात्मक रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । एमाले इतरका लागि भने भण्डारीको निरन्तरता आवस्यक छैन ।
राष्ट्रपति आफैँमा राष्ट्रको हित गर्ने एक गरिमामय पद हो । जहाँ सकेसम्म सर्वस्वीकार्य व्यक्ति रहनुपर्छ । र यो पद प्रधानमन्त्री जस्तो पनि हैन । अर्कोतर्फ मुलुक नयाँ ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको छ । निर्वाचनसँगै र संघीय संरचानामा राज्य प्रवेश गरेको अवस्थामा सरकार सहित महत्वपूर्ण निकाय पनि फेरिपनुपर्छ ।
त्यसो त, निर्वाचनको कार्यभार सँगै नयाँ सरकार र सरकार सँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख फेरिनुपर्छ नै । तर विद्यादेवी भण्डारीले दोहोरिने ईच्छा देखाउनु नाजायज त नहोला तर जायज पनि हैन ।
राज्यको ढुकुटी खर्च हुने बहानामा भण्डारीले दोहोरिनका लागि जस्तो पहल गरेकी छन् त्यो उनको जिद्धी मात्रै हो । नयाँ म्याण्डेटसँगै नयाँ राष्ट्रप्रमुख नै निर्विकल्प हो । अन्यथा भण्डारीले शक्ति दुरुपयोग गरेको ठहर्नेछ ।
राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा
संविधानतः कार्यकारी भुमिका नभए पनि दुई सय ४० वर्षको राजतन्त्रलाई बिदा गरेर स्थापित भएको गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति संस्था पछिल्ला दिनमा गणतन्त्रको प्रतिक मात्रै होइन राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा पनि देखिन्छ ।
समग्रमा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सामान्य नै रह्यो । केही विवादका बीच पनि उनले आफ्नो पदीय मर्यादा र क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर राज्यहित विरुद्ध केही गरिनन् । यस हिसावले पनि उनी यही अवस्थामा ससम्मान विदा भएर जानु उनको लागि र लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि उचित हुनेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारी दोहोरिनुपर्छ वा फेरिनुपर्छ भन्ने विषय भण्डारी एक व्यक्तिको मात्रै होइन । यो त एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रबृत्तिको पनि प्रश्न हो । विद्या भण्डारी व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा रहनु कसैका लागि पनि समस्या नहोला । तर उनलाई दोहोर्याउँदा आगामी कार्यकालमा त्यही नजिर दोहोरिनसक्ने खतरा छ ।
यदी एक जना व्यक्तिलाई पदमा दोहोर्याउन सिंगो सरकार नै लाग्छ भने त्यसको परिणति अवस्य पनि प्रिय हुनसक्दैन । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मुल्य भन्दा पनि व्यक्ति प्रमुख भन्ने मान्यता आम जनतामा स्थापित हुनसक्छ ।
पदीय भागवण्डामा झट्का
वाम एकताको अभ्यास चलिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्तिगत जिद्धी अघि सार्दा वाम एकतामै खतरा पर्नसक्ने अर्को समस्या छ । भण्डारी राष्ट्रपतिसँगै नेकपा एमालेको नेत्री पनि हुन् । उनी पार्टीको नेत्रीको हैसियतले वाम एकताप्रति प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
वाम एकताको जटिल प्रयासका बीच उनले यस्तो जिद्धी गर्दा ‘हलो अड्काएर गोरु पिट्ने’ उनको नियत देखिन्छ । यदी उनकै कारण वाम एकता रोकियो भने इतिहासमै उनको गलत छवि मेटिने छैन ।
पछिल्लो म्याण्डेटअनुसार माओवादी केन्द्र भन्दा नेकपा एमाले ठूलो दल हो । वाम एकताको पहलमा पनि एमालेको बढी भुमिका छ । जसकारण पनि एमालेका नेताहरु यसप्रति लचिलो हुनु जरुरी छ । विद्या भण्डारीको जिद्धीमा केपी ओली मौन रहनुले पनि उनी लचिलो नभएको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रपति पदमा भण्डारीको विकल्पको खोजी केपी ओलीले नै गर्नुपर्छ । तव मात्र वाम गठबन्धनको इमानदारिता र लोकतान्त्रिक मान्यता सँगै स्थापित हुनेछ ।